OlwamaNdiya noMalema luveza ubuxoki nobumbulu nhlangothi zombili - Bayede News
OlwamaNdiya noMalema luveza ubuxoki nobumbulu nhlangothi zombili
Amazwi kaSolwazi uRodney asahlaba ephukele
Ukujikijelana ngamazwi, ukusolana akuyikhombi inkinga yangempela futhi akuzi nasixazululo
Kukhona ukuvumelana cishe kuzo zonke izinhlangothi ekutheni iNingizimu Afrika inenkinga yobuhlanga. Kubukeka futhi kunokuvumelana ukuthi yize sekuphele iminyaka engama-24 yenqubo yedemokhrasi izibazi zenqubo yobuhlanga zisabonakala.kwezomnotho, ekuklanyweni nasebunini bomhlaba, kuhlalompilo nakweminye iminxa esizweni. Nokho okunye okuvelayo wubumbulu nobuxoki okuvela uma kufika odabeni lobandlululo.
Lobu bumbulu nobuxoki bugqame kakhulu ezinsukwini ezedlule odabeni oluthinta ukukhuluma komholi we-Economic Freedom Fighters (EFF), uMhlonishwa uJulius Malema. Enkulunweni yakhe ayethule embuthanweni weqembu lakhe lapho ethe ingxenye eningi yamaNdiya inobuhlanga. Le nkulumo kayiyintsha kepha kumangazile uma isiphenduka umlilo wequbula kwathi uMalema neqembu lakhe basolwa ngokuba ngabagovuzi bempi yokubhekana ngeziqu zamehlo kwezinhlanga kuleli.
Ekhuluma emcimbini owabe uhlelwe yinhlangano iKharwastan Civic Association, lowo owayenguMehluleli weNkantolo YoMthethosisekelo uZac Yacoob waphawula ngomphakathi wamaNdiya: “Uma amaNdiya enombono wokuthi abekwa eceleni (awabhekelelwe) kunakwe aboHlanga, kuyomele akhumbule ukuthi ngaphansi kombuso wobandlululo wona ayephethwe kangconywana kunaboHlanga,” kusho uYacoob.
Waqhubeka uYacoob wathi: “Iningi lamaNdiya liyabandlulula ngokobuhlanga, njengoba ngikholwa ukuthi naboHlanga bayabandlulula ngokobuhlanga, kepha, esengike ngadlula kukho mathupha ngixoxisana nabanye emphakathini (wamaNdiya) ngingasho ukuthi okungenani amaphesenti angama-90 amaNdiya esengike ngahlangabezana nawo ayabandlulula”
Ukuphawula kukaMalema kwenze kwanenkulumo mpikiswano nxa zonke kepha kuyo bekukhona okuphawulekayo.
Okokuqala okuphawulekayo wukuthi izinhlangano ezivikela amalungelo abantu kanye nalezo ezingekho ngaphansi kukaHulumeni zibukeka zimbuluza . Eyokuqala kube yiKathrada Foundation ethe emuva kokuvela kwalokhu kukhuluma yaqoma ukuthi ibe nezingxogxo noMalema.
Isikhulu seKathrada Foundation uMnu uNishan Bolton uthi, “Lokhu kukhuluma okubopha isizwe ngasifociya sinye akulethi sixazululo enkingeni lena abayibonayo. Ngicabanga ukuthi uma ngithi onke amaNdiya athatha aboHlanga njengabantukazana ngaphandle kokuthi ngikusekele lokho kuyinkinga. Inkinga enginayo enkulu ngokusho kanje, wukuthi uma wazi ukuthi abantukazane baphathwa kanjani, yini osuyenzile? Wabika kubani? Wavula amacala amangaki? Abaholi namhlanje akudingi ukuthi babone izinkinga kuphela emphakathini. Kufanele babuye baqhamuke namasu ngenkinga nokuthi bacabange ukuthi umphakathi kufanele wenzeni ngaleyo nkinga.”
Lokhu kukhuluma kwabeKhatrada Foundation kuyadida ngoba kubukeka kuwukuhlehla kwenqama nokumbuluza. Ngoyaka owedlule le nhlangano ibambisene nabeSouth African Human Rights Commission (SAHRC) bamangalela inhlangano yaboHlanga yaKwaZulu-Natal, iMazibuye African Forum ngokubandlulula ngokobuhlanga nangokuphehla uzwathi.
Abaholi bale nhlangano oMnu uPhumlani Mfeka kanye noMnu uZwe Sangweni basolwa ngokuba nenzondo ngamaNdiya. Lokhu kulandela ukuthi inhlangano yabo yaphimisa amagama athi amaNdiya kuhlanganisa noGhandi babandlulula aboHlanga futhi bayabaxhaphaza.
USihlalo weSAHRC uMnu uBongani Majola waze wama njengofakazi ecaleni elabe libhekene neMazibuye eNkantolo Yokulingana.
Kulokhu iSAHRC kudinge ukuba icelwe ukuba iphenye iDemocratic Alliance (DA). Esitatimendeni sayo iDA ithe isithole isiqinisekiso sivela kuSAHRC ukuthi izoke ibheke ukuthi engabe lolu daba lufanelwe wukubhekwa yiyo yini noma ngolunye uhlaka. Lokhu kushiya imibuzo ekutheni yini le engayiboni iSAHRC neKathrada Foundation odabeni lweMazibuye kanye nolukaMalema.
Nakhona lapho ukuqhasha kweDA kulolu daba kushiya imibuzo ekutheni ngabe ukujaha kwayo ukuya kuSAHRC kungenxa yezizathu ezinhle noma wubuthamelangozi bepolitiki.
UMnu uVukani Mde wenkampani yocwaningo iLEFTHOOK uthe uMalema ngale nkulumo yakhe unezinhloso ezithize. “Ngokuqonda ngqo amaNdiya iqembu i-EFF lifuna ukwengama i-ANC KwaZulu-Natal, lapho ipolitiki yobuhlanga ingananelwa khona.”
USobaba weBandla LamaSheshi eJohannesburg, uMfu uDkt uSteve Moreo, usole uMalema nabalingani bakhe ngenkulumo enenzondo:
“Ukuphawula okwenzekile kuyinkulumo enenzondo kwaphela – okuyisikhali sepolitiki esivusa ubuhlanga obunyanyisayo bobandlululo okwalwelwa izigidi zaseNingizimu Afrika ukuze zithole inkululeko ngowe-1994. Ukuhlasela kwabo ngikwesaba kube ngathi siqala ukuphindela emuva ngokwenkululeko eyazatshalazelwa yalwelwa ngamadoda namakhosikazi aqavile.
USolwazi uBrij Maharaj wakwaNgqondonkulu e-University of KwaZulu Natal uthe ngenkulumo kaMalema: “Isibophezelo sokhetho sangowe-1948, iNational Party (NP) yathi amaNdiya ‘ayisici sokufika esingeke samukeleka ekuhleleni iNingizinu Afrika’ kufanele aphindiselwe e-India. Kuyacaca ukuthi uMalema ne-EFF bazama ukuphumelela lapho kwahluleka khona iNP.”
Uqhubeke wathi: “UMalema uqinisile uma ethi kukhona ababandlululayo emphakathini wamaNdiya. Nokho bakhona nasemiphakathini yabamhlophe, yamaKhaladi, yamaShayina yamaZulu, yamaXhosa, yabaPedi nakweminye imiphakathi. Nokho, ebuhlakanini bakhe obungapheli, uMalema unqume ukugxibha amaNdiya njengabandlululayo. Ngenkathi enza kanjalo uvela njengomxabanisi, obuka hlangothi lunye, nobhebhezela inkulumo enenzondo, futhi ungumpetha walokhu – kuwukungaziphathi kahle komuntu onogqozi lokuba ngumengameli wezwe,” kusho uSolwazi uMaharaj.
Omunye uSolwazi u-Adam Habib ushiye angalazi kuMalema ne-EFF ethi: “Uyehluleka ukuzilumula kumuntu ohlaseleka kalula njengoMnu uJacob Zuma, i-EFF isibuyisele ukuqhubulushana, ukwesabisana, ngisho nobudlova ngokobuhlanga kubantu abaningi nakulabo abelusa ezobuhlanga. Sebephimise okobuhlanga kubelungu emaKhaladini nasemaNdiyeni bethola ukwesekwa ngalokhu okuvela emphakathini,” kubeka uSolwazi uHabib.
Uqhubeke wasola wagxeka abanye ngalokhu akubize ngokuyekelwa kwe-EFF ukuba yenze ekuthandayo.
Kukho konke lokhu kuphawula okugxeka inkulumo kaMalema okuqaphelekayo wukuthi akekho othi iliphutha kepha abaphawulayo bababaza ubuhlanga kuyo. Lokhu akusilethi isixazululo njengoba kugcina sekuyinkombankombane. Okuliqiniso elingephikwe muntu wukuthi ihlathi lomile ebudlelwaneni bamaNdiya naboHlanga. Ubufakazi balokho wukuthi yize abaholi nhlangothi zombili bezama ukudweba isithombe esihlukile kepha imizamo yabo iphelela ezeni ngoba kuba nokuthula okwesikhashana bese kubuye kuvuka.
Nakulolu daba abaholi bayanyanyalata akekho ophumela obala.
Umnikazisitolo kuthiwa wakhaphela ‘umufi’
Isinyonke kabili i-EFF kwezombusazwe
Kuvamile ukuthi nxa iqembu elisha kupolitiki lethulwa kube nenhlokomo. Le nhlokomo yehlukana kabili: Kukhona leyo enanela ukwethulwa kweqembu, kuthi ngakolunye uhlangothi kube khona abaqalekisa ukwethulwa kwalo. Eminyakeni emihlanu eyedlule iNingizimu Afrika yamukela ukwethulwa kwe-Economic Freedom Fighters (EFF).
Ziningi izizathu ezenza kube nenhlokomo, esikhulu kwabe kunombono (kwabanye lokhu bekuyisifiso) sokuthi ku-EFF iqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) kungenzeka ukuthi selithole untanga kwazise amanye amaqembu ayekhona afana neDemocratic Alliance (DA) abe ebukeka ebuthuntu.
Khona lapho i-EFF inyelwe yinyoni esandleni njengoba ithe ifika nje enkundleni yombusazwe wakuleli kwenzeka izigameko eziningana nekwazile ngobuchule ukungena ngenxeba yahola imikhankaso ebe ngundaba mlonyeni. Esinye salezi zigameko kwaba yisibhicongo esenzeka mhla zili-16 kuNcwaba ngowezi-2012 eMarikana. Kulesi sibhicongo kwasala enkundleni abavukuzi abangama-34 kwalimala kanzima abangama-78.
Ubuholi be-EFF ngobuchule bakwazi ukuluthathela kulo lolu daba bama njengehawu nabakhulumeli bemindeni yalabo abasala enkundleni. Lokhu kwenza indawo yaseMarikana ibe yisizinda saleli qembu. Ubufakazi bokuthi le nhlangano inamandla eMarikana wukuthi uze wahamba loyo owayenguMengameli uZuma engalubhadanga eMarikana kanti loyo oze emuva kwakhe uMengameli uRamaphosa usabikezela ukuthi usazoya kule ndawo nakhona uthi uzoya ehamba nomholi we-EFF, uMnu uMalema.
Esinye isigameko esenza leli qembu laba sematheni kwaba wumkhankaso walo owalandela umbiko woMvikeli WoMphakathi ngokusetshenziswa budlabha kwemali ngesikhathi kwakhiwa ingxenye yomuzi kalowo owayenguMengameli wezwe uMnu uZuma, kwaDakw’udunuse eNkandla. Iqembu i-EFF lakwazi ukusebenzisa lo mbiko ukuqhuba umkhankaso wokuphoqa uZuma ukuba akhokhe ingxenye yemali eyasetsheziswa nokwaba yinto eyagcina ilanyulwe yiNkantolo YoMthethosisekelo, neyanquma ukuthi nembala uZuma akakhokhe.
Okunye ephumelele ukukwenza le nhlangano wukuqhamuka nemikhankaso eheha abantu abasha isebenzisa izinkundla zokuxhumana. Namuhla i-EFF iwahola phambili amaqembu amadala ngokukwazi ukusebenzisa izinhlelo zokuxhumana.
Kulezi zinsuku amalungu nabaholi be-EFF bahola umkhankaso wokubuyiselwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. Yize iqembu elibusayo nohulumeni bekhuluma ngezinhlelo zokuguqulwa komthethosisekelo, i-EFF isibahambele phambili njengoba isiqhamuke nomqulu osihloko sithi; Frequently Asked Questions on Land Expropriation Without Compensation , nehlose ukufundisa ngawo uquqaba ngodaba lokubuyiswa komhlaba. Akukho ukungabaza ekutheni udaba lomhlaba yilo leli qembu elizolubeka eqhulwini ngokhetho lwangonyaka ozayo.
Eminyakeni emihlanu yaba khona i-EFF isikwazile ukuzibeka esicongweni yedlula amaqembu amadala. Uma ungazi ngombusazwe wakuleli ungafunga ukuthi yiyo eliqembu elikhulu kwaphikisayo kanti inamaphesenti ayisi-6 vo kepha umsindo ewenzayo unamandla amakhulu.
Ukuphawula komholi wabo ngalokho akubize ngobandlululo lwengxenye ethize yamaNdiya kubuka kungamenzela izinto ezimbili lo mholi neqembu lakhe. Okokuqala kuzomlethela izinhlamba njengoba kwenzeka kwenze nabanye abantu kakhulukazi abezinye izinhlanga kuhlanganiswa namaNdiya bamexwaye. Kepha ngakolunye uhlangothi kungenza ingxenye eningi yaboHlanga abanomuzwa ofana nowakhe kakhulukazi ezindaweni lapho kugcwele khona umphakathi wamaNdiya bameseke bamamukele njengomkhulumeli wabo.
Kungalesi sizathu kukhona ukunyathela ngokucophelela kwezinye izinhlaka zomphakathi ngisho kulezo ezeseka nezisebenza nomphakathi wamaNdiya. Njengomholi onobuchule uMalema neqembu lakhe bayazi ukuthi lokhu kuwukugembula okungabazuzisa. Yingakho bengajahile ukuthi le nkulumo mpikiswano isheshe iphele ngoba ibenza babe sematheni njengesikhathi sesibhicongo saseMarikana kanye nomkhankaso owawududula uZuma.
nguMfo waKwaNomajalimane Jul 6, 2018